. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ခုတလော
ခုတလော ဘာတွေ ရှုပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလဲ .. :D
အရင်တပတ်က အိမ်ပြောင်းပါတယ် .. ဝေးဝေး လံလံ ဟိုဘက်ကားလမ်းကနေ ဒီဘက်ကားလမ်းကို ပြောင်းတာပါ .. :D အရင် အိမ်မပြောင်းခင်ကတည်းက ကိုယ့်အခန်းကိုယ် မရှိတာများပြီး အလုပ်ပြီးတာနဲ့ ရောက်ရောက်သွားတတ်တဲ့ အိမ်ပေါ့ .. ခုတော့ ပြန်ချင်ရင် အိမ်နောက်ခန်း ၀င်လိုက်ရုံပဲ .. အိမ်ပြန်ဖို့ရာ အီလေးဆွဲပြီး နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ..
သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းမက်တဲ့ မိုးခါးအတွက် ခုတော့ သူငယ်ချင်းလို ခင်မင်မှုမျိုး မောင်နှမတွေလို ရင်းနှီးမှုမျိုးနဲ့ အိမ်လို့ ပီပီ သသ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ နေရာတခုမှာ နေနေရင်း အပြင်လောကနဲ့ပါ အဆက်အသွယ် ပြတ်ချင်သလိုလို ဖြစ်နေပါပြီ :D .. ဘယ်လောက် မောင်နှမတွေ တရုံးရုံးဖြစ်နေလဲဆို မျက်နှာချင်းတွေဆိုင် အပြိုင်ပွေလီနေကြပြီး စာရေးဖို့တွေပါ လစ်ဟင်းတဲ့ထိပါပဲ ..
သွေးသား မတော်စပ်ကြဘူး .. ဒါပေမယ့် ခင်ရာ ဆွေမျိုး ..
ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်လည်း မဟုတ်ကြဘူး .. ကြီးပေါင်း ကြီးဖော်ပေါ့ .. :P
အတွေးထဲမှာတော့ မိသားစုလေးတခုလိုပါပဲ ..
အချိန်တန်ပြီဆို ဘယ်သူ မလာသေးဘူးလဲ .. လာနေပြီလား .. ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ .. ဒီလူက မလာဘူးလား .. ဘာလို့လဲ .. ဘာဖြစ်လို့လဲ စသည်ဖြင့် ချော့တန်ချော့ ခြောက်တန်ခြောက် .. နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး အပြိုင်ပလီ (အဲ .. ဟုတ်ပါဘူး .. :P) အပြိုင်အဆိုင် ချစ်နေကြပါတယ် ဆိုပါတော့ .. :P
ခု လောလော လတ်လတ်မှာ .....
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တွေးဖို့ အချိန် မရှိဘူးဖြစ်နေတယ် .. ပလီရ ရန်ဖြစ်ရနဲ့ တွေးမယ်ကြံလိုက်ရင် အိပ်ချိန်ရောက်ရောက် သွားလို့ပါ .. :D ပြောရမယ်ဆို တွေးလည်း မတွေးချင်ဘူး .. သိပ်ဝေးဝေးထိ တွေးလိုက်မိရင် ခု စိတ်ချမ်းသာနေတာတွေရဲ့ ဝေးဝေးကို ရောက်သွားမှာဆိုးလို့ ..
အပျော်ဘက်ပဲ စိတ်ရောက်နေတယ် .. စိတ်ချမ်းသာနေရင် အကုန်မေ့မေ့နေတတ်တယ် .. (စိတ်ချမ်းသာတာကောင်းပေမယ့် တချို့တာဝန်တွေ လစ်ဟင်းကုန်နေပြီ ..)
ရောဂါ တော်တော် ကြီးနေပါတယ် .. ထမင်းစားပြီးရင် မျက်လုံးက ပိတ်ချင်နေတယ် .. :P
မြင်နေရတဲ့ မျက်နှာတွေ :P ..
ကွန်ပျူတာရှေ့ .. :P (နောက်တာ) အပေါ်က ပြောထားတဲ့ အိမ် ..း))
အချိန်တွေ .. မလိုရင် သိပ်ကုန်လွယ်တာပဲ .. မြန်မြန်ကုန်စေချင်ရင် မကုန်ဘူး ..
ဝေးဝေးကဆို မိသားစုလေး .. အနားမှာတော့ အများကြီးပဲ .. တယောက်တမျိုး အားလုံးကတော့ ချစ်ဖို့ ကောင်းနေတာပဲ ..း)
ဟိုတလောကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ပျက်တယ် .. ခုတလောတော့ မပျက်တော့ပြန်ဘူး ..
စိတ်ထဲက မပါပဲ ပြောတတ်တဲ့ ၀တ်ကျေတန်းကျေ စကားတွေ .. (စိတ်ပျက်ပေမယ့် လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်း သိနေတော့ ..)
လူကြီးလူကောင်းယောင်ဆောင်ထားတဲ့ လူတွေ .. မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ အရှက် မရှိသူတွေ ..
အိမ်ပြန်ချိန် .. ရုံးပိတ်ရက် ..
မရှိဘူးထင်တယ် .. စဉ်းစားလို့ မရဘူး ..
ရှေ့မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကြုံတွေ့ရမယ့် ကံတရား .. တွေ့ ကြုံ ဆုံ ကွဲ .. (မေ့ထားချင်သေးတယ် ..)
လိုအပ်တာလေးတွေ အချိန်နဲ့ အမျှ ရှိနေပေမယ့် အထူးတလည် လိုအပ်တာမျိုးတော့ မရှိပါ ..
ဆိုက်ပရက်စ်က စာဖိုးမှူးကြီး လက်ရာ ..း))
ခုတလော လွမ်းဖို့ အချိန် မရှိပါ ..
ခုတော့ သနားစရာလူ မရှိဘူး .. ကိုယ့်နားလည်း ဘယ်သူမှ မရှိဘူးလေ .. သနားဖို့ ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းကိုမြင်ရင်တော့ သနားတယ် ..
ဆုမတောင်းဖြစ်ဘူး .. ဆန္ဒတွေတော့ ရှိတယ် .. ဆန္ဒတွေအတိုင်း ပြည့်ဝလာရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ ..
အကျယ်ကြီးတော့ မအော်မိပါဘူး .. ခပ်တိုးတိုး ရေရွတ်မိတယ် ဆိုပါတော့ .. :P .. လုပ်သင့်တာတွေ လုပ်ရဦးမယ် .. လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ် ..
ကိုယ့်ထက် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ကောင်းမွန် ပြတ်သားသူတွေ .. တပါးသူ အပေါ် စေတနာ ထားနိုင်လွန်းတဲ့ သူတွေ .. ဇွဲ ၀ီရိယ အားကောင်းတဲ့သူတွေ .. အမှား အမှန်ကို ချင့်ချိန် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေ ..
အရှက်တရား မရှိတဲ့သူတွေ .. ကိုယ် အသာရနေရင် ပြီးရော သူတပါးအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် မရှိသူတွေ ..
ဒီပို့စ်ကို ရေးဖို့ ၃ရက် အချိန်ယူလိုက်ရပါတယ် .. :P
ချစ်လှစွာသော အကိုကြီး ကိုဖိုးစိန်က စာမရေးတဲ့သူတွေကို ကြည့်မရလို့ ဆိုပြီး တဂ်ပါတယ် .. ဘယ်ကြည့်လို့ရမလဲ .. နေရာချင်းက အရမ်းဝေးတာကိုး .. :P
ရေးသားသူ မိုးခါး at 3/22/2010 06:59:00 PM